SBO – Bitootessa 19,2020] Itti baha walgahii GS-ABO fi Haala yeroo irratti ibsa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Hoggantootni olaanoo dhaabichaa Gaazexeessitootaaf kennaa jiran – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosSBO – Bitootessa 19,2020] Itti baha walgahii GS-ABO fi Haala yeroo irratti ibsa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Hoggantootni olaanoo dhaabichaa Gaazexeessitootaaf kennaa jiran
SBO – Bitootessa 19,2020] Itti baha walgahii GS-ABO fi Haala yeroo irratti ibsa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Hoggantootni olaanoo dhaabichaa Gaazexeessitootaaf kennaa jiran
[SBO – Bitootessa 19,2020] Itti baha walgahii GS-ABO fi Haala yeroo irratti ibsa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Hoggantootni olaanoo dhaabichaa Gaazexeessitootaaf kennaa jiran
ONN| Bitootessa 19,2020] Itti baha walgahii GS-ABO fi Haala yeroo irratti ibsa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Hoggantootni olaanoo dhaabichaa Gaazexeessitootaaf kennaa jiran
Waa’ee Koyyee Faccee irratti ABOn ejjannoo Maal qaba?
“Dhimma Koyyee Faccee, dhimma Fadiis, dhimma Boosat,…qofa qofaatti dubbachaa yoo oolle rakkina kana keessaa hin baanu. Biyya kana wantoota lamatu rakkisaa jira. Inni tokko humna mootummaa kanaa kan sirna Federaalizimii jallisee caasaafi humna qabutti fayyadamee aangoorra turuu barbaadudha. Inni lammaffaan humna sirna Federaalizimii diiganii sirna durii sana deebisuuf hojjetanidha. Humnoonni kun biyya kanatti balaa guddaa fidu. Hummoonni kun dhaabbachuu qabu. Balaa kana hambisuuf uummanni dammaqee qabsoo wareegama itti kaffale tikfachuu qaba.” Jaal Daawud Ibsaa guyyaa har’aa ibsa miidiyaaf kennan irratti.
Jaal Bulchaa Sooressaa jedhamu kaampii WBO Soloolootti leenjii waraanaa jajjabeef kennaa turan,akkuma hooggantoota ABO biroo nagaatu jira jedhanii qabsoo karaa nagaa fudhatanii bosona keessaa uummatatti makamanii turan,haa tahu malee yeroo ammaa gara Dirree Qabsoo Soloolootti deebi’aniiru!
Karaan Oromoo baasu karaa WBO qofa!
Coloneel Abiyyiin Noobeelii Keenya Deebisi Jechaanii jira” Abbaan Noobeelichaa!
Kitaaba #መደመር keessatti fuula tokko irratti akkas jedha
Girisaan (መንጋ) biyyaaf balaa guddaadha, humna guddaa namni muraasni sochoosuu dandeenyaan mootummaa tokko irratti dhiibbaa guddaa fida……garu jedha kitaabicha keessatti “garuu namoota muraasa Girisaa yeroo barbaadanitti sochoosuu danda’an #laamshesinaan humna guddaa kana gara misoomaatti jijjiruun biyya akka jijjiiran gochuun ni danda’ama.” jedha.
Hubadhaa መንጋ (Girrisaa) kan isaan jedhaniin nama mirga isaa gaafatu, gaaffii dinagdee kaasu, ….malee kan umaa hin beekne miti!! Gabaabumatti Qeeroon Girrisaa jedhu!! Qeerroo qoricha Roorroo ture!! Seenaa qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa warra qaban muraasa yoo ilaallu
Biyya galuu hin qabu ture, erga galuuf murteessee bakka isaa nama bu’u qopheessuu qaba ture,
Har’a osoo inni fi OMN Minnesota jiraatanii Bilxiginaan akkas akka fedhe hin ta’u ture.
Erga galee miseensa paartii kamuu ta’uu hin qabu ture, erga ta’uuf murteessee ifa osoo hin taasisiin dursee lammummaa fudhachuu qaba ture.
Osoo miseensa paartii ta’uu baate sila biyya keessas taa’ee akkuma duriitti barreessa, dubbata ture. Osoo sababa lammummaan wal qabatee shiraan miseensummaa isaatti gufuu ta’uu baatanii KFO keessatti akkuma jalqabee sochii cimaa taasisuu itti fufa ture!!
Karooraa PP akka hin fudhannee dubbachuu hin qaban ture achuma keessa ta’anii qabsaahu qabu ture, erga dubbatanii booda achumaan callisuu hin qaban ture, waa lama dhaban!!
Waggaa dheeraaf yeroo ABO hogganan hoggantoota Qubee generation ta’an heddu geessisuuu qaban ture, ammas warruma jiruuf angoo dabarsuu qaban ture!!
KFO, ABO fi PBO paartilee biroo waliin osoo qindoomina hin uumiin dursanii waliin qindoomna uumuu qaban ture, yeroon yeroo waliin falman osoo hin taane yeroo waliin waliif falmaniidha.
Har’a yeroo ummatni keenya rakkoo adunyaa kan ta’e coronan yaddoo keessa galte jirtutti ummata keenya rakkoo addaa keessa jiru kan mootummaan uume mootummaa irratti dhiibbaa uumun gaaffiin Oromoo deebii argachuu kan hin dadhabneef kana irraa madda!!
UK in Ethiopia: British Ambassador on the measures that we are taking following a UK diplomat testing positive for COVID-19